Talata 11 Jiona 2019. – FJKM
Talata 11 Jiona 2019.
Asan’ny Apostoly 15.22-41
Tsara ny mahita vahaolana amin’ny zava-manahirana , fa mbola tsara lavitra ny mahay manatanteraka izany . Ahoana no nataon’ny Apostoly ?
1-Nampandriana an-tsoratra ny vahaolana hita
Nanao taratasy izy ireo , niraketana ny fanapahankevitra natao ho famahana ny olana nitranga. Tsy taratasy nilaza hevitra fotsiny anefa fa fanehoam-piombonana tamin-dry i Paoly sy ny asan’ Andriamanitra nataony koa. Naseho tsara koa ny hoe: « sitraky ny Fanahy Masina sy izahay » (and28).
2-Nanendrena olona hanatanteraka ny hevitra tapaka
Dia notendrena i Joda sy i Silasy hiaraka tamin’i Paoly sy i Barnabasy handeha hitondra ny taratasy tany amin’ireo mpino , ka « nony efa namaky izany ny olona dia nifaly noho ny anatra tsara » (and31). Tratra ny tanjona dia ny filaminan’ny Fiangonana .
3-Tandremo anefa !
Voavaha ny olana iray , fa nipoitra indray ny hafa . Ny and 36-41 dia takila mampalahelo indrindra amin’ny fitantarana ny dia misioneran’i Paoly . Nifanditra mafy ny samy mpitory ny Filazantsara ary indrindra , nisaraka mihitsy . Tsy afenin’ny Soratra Masina izany mba ho fampitandremana antsika sy mba hiambenantsika , fa ho fampaherezana antsika tsy ho kivy koa raha tojo ny toy izany .